Ọ Joụ nke Clickpị | Martech Zone
Ecommerce bụ sayensị - mana ọ bụghị ihe omimi. Ndị na-ere ahịa n'ịntanetị kacha mma ekpochapụlarị ụzọ maka ndị ọzọ site na itinye ọtụtụ puku usoro nyocha na ịnye data nke ndị ọzọ iji hụ ma mụta ihe.
Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụ ọgụgụ ndị na-ahụ maka ịntanetị zuru oke n'ịntanetị. Maka ndị na-ere ahịa, ọnụ ọgụgụ a gosipụtara ikike na-eto eto nke ịntanetị. Iji dọta ndị ahịa a jikọtara ọnụ, ndị na-ere ahịa ga-eme ka ịzụta na weebụsaịtị ha dị ụtọ, adaba, ma dịkwa mfe. Kedu ihe ọzọ ndị ahịa na-achọ site na ahụmịhe ha n'ịntanetị? Anyị na-eleba anya na nyocha comScore kachasị ọhụrụ maka ịmatakwu mmasị na omume ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Ọyụ nke ingpị bu infographic nke Baynote mere tinye na Comscore data.
Tags: baynoteleleemezienyocha ndị ahịamgbanweinfographicngwa ahiaịzụ ahịa n'ịntanetịịnye ọnụahịaalaghachimbupuịzụ ahịa omume